Hanjabaadda Dowladda Federalka Ee Ku Wajahan Ganacsatada Muqdisho Ma Tahay Mid Dhaqan Geli Karta? W/Q Warfaa Kheyrdoon.
Monday July 24, 2017 - 15:24:18 in Wararka by Super Admin
Kadib markii ay dowladda federalku ku fashilantay hawl galkii ay ugu magac dartay xasilinta caasimadda, sidoo kalana uu Wasiirka Maaliyadda sheegay in dowladda Turkigu ka goosatay dhaqaale badan oo ay siin jirtay, ayaa waxay ku khasbanaatay in ay han
Kadib markii ay dowladda federalku ku fashilantay hawl galkii ay ugu magac dartay xasilinta caasimadda, sidoo kalana uu Wasiirka Maaliyadda sheegay in dowladda Turkigu ka goosatay dhaqaale badan oo ay siin jirtay, ayaa waxay ku khasbanaatay in ay handaddo shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir.
Sabtidii lasoo dhaafay oo ay taariikhdu ku beegneyd 22-07-2017 ayaa waxaa shirar jaraa’id qabtay mas’uuliyiin ka tirsan laamaha ammmaanka oo dhammaantood qurba joog ah sida:- Wasiirka amniga Maxamad Abuukar Islow, Taliyaha Nabad sugidda Sanbaloolshe, Taliyaha Boliska C/xakiin Daahir Saciid iyo xubno kale, waxayna goodis iyo eedeyn kala dul dheceen shacabka magaalada Muqdisho oo ay ku eedeeyeen in ay garsoor u doontaan Maxkamadaha islaamiga ah ee Al-shabaab si lamid ahna taakuleeyaan.
Lahjadda ay isticmaalayeen waxay u muuqatay mid lagula hadlayo dad aan muwaadiniin rasmiya ahayn oo darajada labaad ku jira, ujeedaduna waxay tahay in shacabka Muslimka ah lagu khasbo maxkamadaha dowladda ee laaluushka, xeerarka iyo qawaaniinta wadciga ku dhisan.
Eedeymaha ay jeediyeen wasiirka Amniga iyo saaxiibadiis waxaa kamid ahaa in reer Muqdisho ay cilaaqo baac dheer la leeyihiin Xarakada Al-Shabaab, ayna bixiyaan Zakada oo kamid ah shanta tiir ee islaamka, taas oo ay sheegeen ciddii bixisa in ay tallaabo ka qaadi doonaan.
Maxaa Ka Dhaqan Gali Kara Handadaadan?
"DALKAAN LAGUMA MAAMULI KARO WAREEGTO IYO WARSAXAAFADEED” Sidaa waxaa yiri oo bartiisa Facebook kusoo qoray Xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah Baarlamaanka, waana runtiis sababtoo ah macquul ma ahan in dadku isaga hogaansamaan awaamiir lid ku ah oo ay soo saareen niman aan iyaguba ammaankooda damaanad qaadan karin oo ku xareysan dhismayaal shub ah oo ciidamo lagu geedaamay.
Kalsooni darro:- Hadalka goodisk ah ee kasoo baxay dowladda Federalka ah ayaa waxa uu geesta kale muujinayaa in aaney wax kalsooni ah ka heysan bulshada gobolka Banaadir, laakin su’aashu waxay tahay maxaa u sabab ah arrintan? Maxay dadku ku jeclaadeen Xarakada Al-Shabaab?.
Dhawaan wargeyska Washinton Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin diraasad ah oo lagu cadeeyay in shacabku ku kalsooni qabaan Al-Shabaab, sababtuna ay tahay cadaaladda iyo hab maamulkooda oo wanaagsan, waxaana lagu yiri sida soo socota:-
"Al-Shabaab waxay si xirfad leh u maamushaa dhaq-dhaqaaqyada qabaa’il, waxayna bixisaa adeegyada aasaasiga ah taasoo ka dhigtay mid nufuud iyo awood siyaasadeed ku leh guud ahaan koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan tuulooyinka, halkaas oo dadka deegaanku aanay ku kalsooneyn dowlada weli fadhiidka ah. Taasi waa inta aan ogaaday intii aan ku gudajiray baaritaankan, anigoo sidoo kalena wareysiyo kala duwan ka sameeyey Kenya iyo Soomaaliya Bilihii January, May iyo June ee sanadkan.
Ammaanka:- A-Shabaab waxay bixisaa adeegyo aysan weli sameynin dowlada Soomaaliya kuwaas oo ay siiso qabaa’illada aanan kalsoonida ku qabin dowlada ama laga saaray hanaanka siyaasadeed ee liita ee wadanka. Al-Shabaab waxay amni ku soo dabaashaa deegaanada ay awoodda ku leedahay.Waxay howlgelisaa Maxkamado ay ku jiraan kuwa loo yaqaano "Maxkamadaha Wareega” si loola dagaalamo dambiyada, loona xaliyo muranada u dhexeeya dadka. Taasi waxay muhiimad gaar ah u leedahay deegaanada ay ka jiraan colaadaha sokeeye, si gaar ah muranada ku saleysan dhulka, waxayna u xaliyaan habab waxtar leh marka laga reebo rabshadaha” sidaasi waxaa tiri’ Tricia Bacon, oo ah Professor Caawiye ka ah Jaamacada Mareykanka, horayna u ahayd falanqeeye arimaha argigixisada u qaabilsanaa Xafiiska sirdoonka iyo baaritaanada ee wazaarada arimaha dibadda Mareykanka.
Fashilka DF ayaa waxa uu gaaray heer shisheeyihii iyaga caawinayay ay ogaadaan waxa keenay in bulshadu kasii jeesato, tanina waa midda laamaha ammaanka ku bixisay in ay ku weyraxaan shacabka Soomaaliyeed oo caqiido ahaan u aaminsan Zakada iyo in lagu kala boxo Kitaabka Qur’aanka iyo Sunnaha nabiga csw, halkii la aadi lahaa Maxkamad ku shaqeysa qawaaniin shisheeye.
Ka qoraa ahaan aniga ma xaqiijin karo waxay ay ku doodayso DF-ka ee ah in Al Shabaab ay lacago ka hesho shacabka Muqdisho waana arrin baaritaan iyo dhiraandhirin ubaahan, haddii uu runyahay warka DF-ka wax ceeb ah ma ahan in Soomaalidu taakuleeyaan dhalinyaro sharafkooda iyo dalkooda difaacaysa.
Warka Sanbaloolshe Ma Ufahmi Karnaa "Anagana Afka Noo Buuxsha”?.
Marka si qota dheer oo waaya aragnimo iyo xilkas leh loo dhuuxo warka kasoo baxay dowladda Federaalka ee loogu hanjabay ganacsatada waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaa banaanka usoo baxaya in wasiirka amniga iyo Taliyaasha ciidamadu ay dirayaan Fariin ah "Ganacsatooy anagana afka noo buuxsha” oo la macno ah in lacago baad dheeri ah lagusoo rogay ganacsatada.
Muqdisho lama mid ah Jabuuti oo ismaaciil Cumar Gelle iyo Xaaskiisa ay gacanta ku hayaan ganacsiga waa dal ganacsatadiisu xur yihiin ayna garanayaan halka dantoodu kujirto.
Tooratoorow iyo Bariire in shacabka Muqdisho booqdaan ayay dowladdu dambi ka dhigtay taasina waa jariimo kale in muwaadin Soomaaliyeed laga mamnuuco tagidda magaalo Soomaaliyeed ayaa muujinaysa axmaqnimada madaxda DF-ka heerka ay gaarsiisantahay.
Shacabka magaalada Muqdisho waxay xilligan wajahayaan dhibaato tii u darnayd kadib markii ilihii dhaqaalaha lagu wareejiyay shirkado ajnabi ah oo si micna darro ah ku qaata hantidii ummada, ganacsatadiina kusoo rogay canshuur xad dhaaf ah kolka ay dekedda wax kala degayaan.
Waxaa lagu soo farraqay qaad iyo fisqi, iyadoo laga dhex furtay hoteello lagu tunto, qamriga lagu cabo oo ay joogaan haween ajaanib ah, waxaana taa ugu wacan qurba joogta ay kamid yihiin wasiirada iyo taliyaasha shaqada ka dhigtay u caga jugleynta shacabka.
Nolosha Muqdisho waxaan ku tilmaami karaa gumeysi shaar qurxoon loo galiyay, Maxaa ummada u haray haddii wadooyinka laga xiranayo sababo la xiriira nin ajnabi ah oo madaarka kasoo degaya ama mid dowladda madaxdooda ka tirsan oo dhoofaya? maxaa ka daran in maalin walba dhallinyarada la xirto kadibna madax furasho lagu soo daayo?.
Arrinta ugu xanuunka badan waxya tahay sida ay ciidamada Amisom uga caado dhigteen iney gaadiidkooda ku jiirsiiyaan dadka shacabka ah, gaadiidka iyo goobaha ganacsiga. Amisom waxay afartii sano ee lasoo dhaafay geysatay 500 oo shil (shan boqol oo shil) sidaas waxaa xaqiijiyay taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka Gen. Cali Gaab.
Haddii afartii sano ee lasoo dhaafay ay dheceen intaas oo shilal ah, ayaa waxay ka dhigan tahay in halkii sanaba ay dhacayeen 125 shil, bishiina 10 shil. Haddaba bulshadu ma mudan yihiin in intaas oo culeys ah loogu sii daro cadaadis iyo caga jugleyn?
Hadalka kasoo baxay DF iiguma muuqdo mid ka dhaqan gali kara magaalada Muqdisho, iyaga qudhoodana wey ogyihiin, laakin waxay doonayaan oo kaliya iney lacago baad ah ka qaataan.
Dadka qaar ayaa aaminsan haddii cadaadiska lagu badiyo dadka shacabka ah in ay sameyn karaan kacdoon amaba ay si toos ah ugu biiri karaan Al-Shabaab.
Baaqeygu wuxuu yahay in ummadu aayaheeda ka fakarto, xal ma ahan in maalin walba uu dhibaateeyo nin ilmihiisa iyo reerkiisa uga soo tagtay Yurubta iyo Mareykanka, waxaa la gudboon in y sharaftoodii iyo heybaddoodii kusoo ceshadaan dariiqa ay tilmaameen Allaah iyo rasuulkiisa oo ah Jihaad,Soomaalidu waxay ku maah-maahdaa (Nimaan warankaagu mudin warkaagu ma galo).
Ganacsatada laga yaabo in uu saameeyo goodiska Sanbaloolshe waxaan leeyahay "Nimaan kuu Furi doonin yuusan kuu rarin”, sababtoo ah amnigiina ma damaanad qaadi karaan qolyaan Villa Somalia Taangiyadu ku ilaaliyaan.
Federalisimka iyo Saameynta Uu Ku Yeeshay Culimada Soomaalida! (Maqaal) Qore: Warfaa Kheyrdoon.